Atlas Copcoconsolidates howlo macdan Chinese - Shiinaha Tianjin Longtop Macdanta
Shirkadda ayaa sheegay in tallaabadan kor u qaadayaan tayaynta iyo xoojinta shirkadda mustaqbalka.
Atlas Copco saari doonaa ay xarunta ku shenyang, oo manufactures oo dhoollatus dhagax weyn oo inta badan gacanta lagu for macdanta iyo dhismaha, hawlaha loo rarayo warshadda ee Zhangjiakou. In shenyang, oo ku saabsan 225 oo qof ayay saamayn doontaa.
In Zhangjiakou, Atlas Copco hadda soo saarta qalabka hoos-u-dalool loo isticmaalaa in lagu qodo blastholes, ceelasha biyaha iyo codsiyada tamar-dhuleedka. In goobta this, oo ku saabsan 45 shaqaale ah ayaa lagu dari doonaa oo maal galinada loo sameeyo in la ballaariyo xarun iyo mashiinada cusub.
"Waxaan heysanaa hawleed alaabta weyn ee Shiinaha, laakiin baahida daciif suuqa macdanta waa in aan loo hubiyo in aan ka faa'iidaysan our awoodda sida ugu hufan," ayuu yiri Johan Halling, Madaxweynaha for Macdanta iyo Rock kabxidda aagga ganacsiga Technique ah.
"Ururinta howlgallada naga caawin doonaan joogo xoog leh mustaqbalka. Waxaan taageeri doonaa shaqaalaha saameeyeen xaaladdan adag. "
Labada hawlgallada ugu horayn u adeega suuqa gudaha Shiinaha.